Booliska oo Shabaab ku eedeeyay inay gubeen 7 gaari oo shacab leeyihiin – AfmoNews
Booliska oo Shabaab ku eedeeyay inay gubeen 7 gaari oo shacab leeyihiin
Afhayeenka Ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay xalay gubeen todobo gaari oo xamuul oo ay leeyihiin dad Shacab ah, kuwaasoo marayay gobolka Bakool ee Koonfurta Somaliya.
Falkaan ayaa ka dhacay sida uu sheegay Afhayeenka tuulada Emed Koore ee gobolka Bakool.
Gaadiidkaan ayaa ka baxay Magaalada Beledweyne, waxaana uu kusii jeeday magaalada Xudur, kuwaasi oo waday raashin dad shacab leeyihiin.
“Xalay abaare 08:00 fiidnimo ayeey Argagixisadu ku gubeen 7 gaadiid ah oo nuuca xamuulka qaada ah bananka hore ee Tuulada EMED KOOREEY ee Gobolka Bakool, gadiidkaan oo ay lahayeen isla markaana u rarnaa dadka shacabka ah, ayaa ka soo baxay Baladweyne kuna sii jeeday Xudur”ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Ururka Al-Shabaab oo ku aadan warkaan kasoo baxay Dowladda Soomaaliya ee loogu eedeeyay in ay gubeen gaadiiid ay leeyihiin Shacab ah.